थाई गुफाबाट बाहिरी निस्किएपछि यसरी सुनाए बालकले घटना, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
थाई गुफाबाट बाहिरी निस्किएपछि यसरी सुनाए बालकले घटना
एजेन्सी । थाइल्याण्डको गुफाबाट उद्धार भएका बालकले आफ्नो दर्दनाक घटना सुनाएका छन्। गुफामा बचाउ दल नपुग्दासम्मका ९ दिन निकै कठिन भएको उनीहरुले बताएका छन्।
घटना बारे जानकारी दिदै उद्धार भएका बालकहरुले आफ्ना २५ वर्षीय प्रशिक्षक इकापोल चांटावांगले हाम्रो जीवन बचाउनका लागि आफ्नो खाना पनि आफूहरुलाई खुवाएको बताए। कोच बन्नु भन्दा पहिला इकापोल एक साधु दिए।
थाम लुआंग गुफामा पसेका मध्ये ४ बालकलाई १६ दिनपछि आइतबार बाहिर निकालिएको थियो भने ४ जनालाई सोमबार उद्धार गरिएको थियो। अब गुफाभित्र बाँकी रहेका प्रशिक्षकसहित ५ जनाको उद्धार कार्य जारी रहेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
गुफा बाहिर आएका बालकले भनेका छन्, गुफामा फस्ने बेलामा हामीसँग निकै कम खानेकुरा थियो। त्यसमा पनि कोचले आफ्नो भागको सबै खानेकुरा हामीलाई बाँडिदिए। उनले हामीलाई शरीरको उर्जा बचाउने तरिका समेत सिकाए। गुफामा रहदासम्म उनले हामीलाई सधै हिम्मत बढाइरहे। उनले भन्ने गर्थे, हामीलाई स्थितीका हिसाबमा आफैले ढाल्नु पर्दछ।
बचाउ दलका कर्मचारीले यसअघि भनेका थिए, हामी बालकसम्म पुग्दा सबै भन्दा कमजोर प्रशिक्षक देखिएका छन्। उनी बालकलाई बचाउनका लागि आफ्नो जिउ ज्यान दिन पनि तयार रहेका रहेछन्।
उद्धार भएका एक बालककी आमाले भनिन्, इकापोल बच्चाका लागि भगवान बने। यदी उनी बच्चाका साथ गुफामा नगएको भए थाहा छैन के हुन्थ्यो। जब उनी बाहिरी आउने छन् तब म सबै भन्दा बढी उनलाई धन्यावाद दिनेछु।
त्यस्तै अर्का बालकका परिवारले भने, इकापोल तिमीले आफूले आफूलाई कहिलै दोषी नठान। यस घटनामा तिम्रो कुनै दोष छैन्। हामी तबसम्म तिम्रो प्रतिक्षा गर्ने छौँ जब सम्म तिमी बाहिर आउने छैनौँ।
केही दिनअघि प्रशिक्षकले चिठी लेखेर बालकका परिवारसँग माफी मागेका थिए।